မေလအတွက်သတင်း။ ရာဇ ၀ တ်မှု၊ ခရီးသွားနှင့်ရုပ်ပြရွေးချယ်ခြင်း။ လက်ရှိစာပေ
မေလအတွက်သတင်း။ အနက်ရောင်ဝတ္ထု, ခရီးသွားနှင့်ရုပ်ပြ၏ရွေးချယ်ရေး
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 01/05/2021 12:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 01/05/2021 12:15 | ရုပ်ပြ, စာအုပ်များ, Novela, ဝတ္ထုနက်
လအသစ် swimsuit y အသစ်က အဆင်သင့် ဒါတစ်ခုပါ5ခေါင်းစဉ်၏ရွေးချယ်ရေး မျိုးသုဉ်းမှတဆင့်ခရီးစဉ်ရှိပါတယ်ဘယ်မှာ URSS နှင့်ရထား၌တည်၏ ဇါတျရှငျဇါတျလိုကျအလွန်မှောင်မိုက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် Galicia ပြီးပြီ ပြင်သစ်, မွန်ရဲ့မြို့, နှင့် ခွာပြန်လည်ဆုံဆည်း နော်ဝေရိုင်းစိုင်းသောအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်။ ကြည့်ကြရအောင်။
1 အနက်ရောင်ရေနှင်းတော - Michel Bussi
2 Úrsula Bas ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဘဝ - Arantxa Portabales
3 နိုင်ငံတော် - Jo Nesbø
4 Snowbreaker - Term -Jean Marc Rochette နှင့် Benjamin Legrand
5 ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏နောက်ဆုံးနွေရာသီ - ဆာရာဂူတီရီရက်စ် (Pedro Arjona ၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူ)
အနက်ရောင်ရေနှင်းတော - Michel Bussi
Michel Bussi Rouen တက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူဖြစ်သည် ဒုတိယဝတ္ထုဒီသည် Gallic နိုင်ငံ၏အမျိုးအစားတစ်ခု၏ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အရောင်းရဆုံးအနက်ရောင်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဆုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏အောင်မြင်မှုသည်နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်သို့လည်းပျံ့နှံ့သွားပြီဖြစ်သည်။
ဒါဟာသတ်မှတ်ထား ဂျမွန်နီ၊ မွန်ရွာ၊ နှင့်၎င်း၏နေထိုင်သူများဖုံးကွယ်ဖို့အများကြီးရှိသည်။ ဆယ်ရက်အတွင်းဖြစ်ပျက်သည် လူသတ်မှုတစ်ခုနှင့်စတင်သည်။ အနုပညာနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်အားထက်သန်သူဂျဲရိုမိုဗာလ်၏အလောင်းသည်အမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုစမ်းချောင်းတစ်ခုတွင်တွေ့ရသည်။ သူ၏အိတ်ကပ်ထဲတွင် Monet's Water Lilies ၏ပို့စကတ်ကို“ ၁၁ နှစ်၊ ဂုဏ်ပြုလွှာများ” ဟူသောစာတန်းကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုအရပ်မှပြဇာတ်ဆုံမှတ်ပါလိမ့်မယ်။
ularsula Bas ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဘဝ - Arantxa Portabales
Arantza Portabales သည်အမျိုးသားရာဇ ၀ တ်မှု၏ ၀ တ္ထုအသစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသော်လည်း၎င်းသည်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ် အနီရောင်အလှတရားသူ၏ယခင်ဝတ္ထုသည်အောင်မြင်ပြီးဆက်လက်တည်မြဲခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုရဲကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် စန်တီယာဂိုအဗ္ဗဒနှင့်အေနာဘာရိုဆိုိုla Agatha Christie နှင့်ဇာတ်ကောင်များ၏နောက်ခံရှိသည့်ကိစ္စရပ်ကိုကိုင်တွယ်ခဲ့ကြသည့်နတ်သမီးမောင်နှံတစ်စုံ။ ယခုသူသည်ဤဒုတိယခေါင်းစဉ်နှင့်အတူတူပင်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူပြန်လည်ရောက်ရှိ။
ဤအချိန်သူတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် အောင်မြင်သောစာရေးဆရာ ularsula Bas ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းSantiago de Compostela တွင်ပုံမှန်ဘဝပုံစံဖြင့်နေထိုင်သည်။ သူမ၏ခင်ပွန်း Lois Castro သည်ရဲအားတိုင်ကြားရန်သွားလိမ့်မည်။ Úrsulaကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပြီးသူမသည်သူမကိုသတ်နိုင်ကြောင်းသူသိသည်။
နိုင်ငံတော် - Jo Nesbø
အားဖြင့်ဝတ္ထုမရှိဘဲတစ်နှစ် Jo Nesbø (နှင့်ပျောက်ဆုံးမရ) ။ အတိတ်နှစ်ခုက ဆီးနှင်း၌အသွေး y နေရောင်ခြည်တိုတိုသည် Oslo ၏ Assassins ၏ Saga အဖြစ်နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ယခုမှာငါတို့ရှာသောဤခေါင်းစဉ်အသစ်လာပါတယ် တစ် ဦး ညီအစ်ကိုပြန်လည်ဆုံဆည်း၏ဂန္ပုံပြင်။ Nesbøအထည်ကိုစာမျက်နှာ ၅၀ မျှသာဖတ်ပြီးသိပြီးသားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အူလမ်းကြောင်းမှဖယ်ထုတ်ပြီးယင်ကောင်များစွာကိုငါ့နားတွင်ထားခဲ့သည်။
ဇာတ်ကောင်များဖြစ်ကြသည် ရွိုင်း, အထီးကျန်လူ လူတိုင်းဝေးသောတောင်ပေါ်ရှိအိမ်ကြီးတစ်လုံးတွင်နေထိုင်သောသူ။ သူသည်ငှက်များကိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးမြို့ရှိဓာတ်ဆီဆိုင်များကိုလည်ပတ်စေသည်။ ပြန်လာပါ သူ Carl, သူ့ညီလေးသူသည်ကားမတော်တဆမှုတစ်ခုတွင်သူ၏မိဘများဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာသေဆုံးပြီးနောက်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပညာသင်ကြားစဉ်ကတည်းကသူမတွေ့ရသေးပါ။ သူနှင့်အတူလိုက်ပါသွားသည် ဇနီးအသစ် Shannon၊ ထူးဆန်းတဲ့ဗိသုကာပညာရှင်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရည်ရွယ်သည် ကောင်းမွန်တဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုဆောက် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအပြင်အခြားဒေသများသို့လည်းချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဖြစ်စေမည့်ရှေးဟောင်းမိသားစုမြေများတွင်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်မြို့ငယ်လေးတွေမှာလူတိုင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိပြီးသိတယ် အတိတ်၏အချို့ဖြစ်စဉ်များ မမေ့လျော့သေး။
နှင်းခဲခွဲ - ကာလ -ဂျင်းမာ့ခ် R ကိုochette နှင့် Benjamin LEgrand
ဤဒုတိယအပိုင်းနှင့်နိဂုံးချုပ် အစွန်းရောက်ရုပ်ပြစာအုပ် အရာ၏ဒါရိုက်တာတို့က 2013 ခုနှစ်ရုပ်ရှင်သို့ဖန်ဆင်းခဲ့သည် ကပ်ပါးကောင် ၎င်းကိုမကြာသေးမီက Netflix ကရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ စာအုပ်ရဲ့ဘာသာပြန်ချက်အကြောင်းပါ Le Transperceneige 4. Terminus, စီးရီးပိုင်ဖြစ်သော 2015 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည် နှင်းဖြူ.
Snowbreaker သည်အေးခဲနေသောကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဆယ်စုနှစ်များစွာရည်ရွယ်ချက်မဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ပြီးနောက်တွင်ရှိသည် ခရီးသွားလာရန်ဆက်လက်အနေအထားတွင်မရှိပါ။ ၎င်း၏ခရီးသည်များ - အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သောလူသားမျိုးနွယ်အပေါ် - သည်ခိုလှုံရာအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ရထားကိုစွန့်ခွာရန်လိုသည်။ အန္တရာယ်များရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဟုထင်ကြသည်။ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ…
ဆိုဗီယက်၏နောက်ဆုံးနွေရာသီ - Sara Gutiérrez (Pedro Arjona ၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူ)
Sara gutierrez သူမသည်ဆရာဝန်၊ ရုရှားဘာသာပြန်သူ၊ စာရေးဆရာနှင့်သတင်းစာဆရာဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ၌ဤ 2021 ခုနှစ်တွင်သူတို့ပြည့်စုံလိမ့်မည် ဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံများပြည်ထောင်စုနိဂုံးချုပ်အပြီးအနှစ် ၃၀ ထိုနိုင်ငံများမှသမ္မတများကအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းနှင့် Mikhail Gorbachev က ဦး ဆောင်သည်။ ၁၉၉၁ နွေရာသီမှာဖြစ်ခဲ့တယ် စာရေးသူထိုအချက်နှင့်လုံးဝလုံးဝမပတ်သက်ပါ။ Kharkov မှသူမ၏ခရီးစဉ်ကိုထွက်ခွာခဲ့သည် (ယူကရိန်း)၊ ငါမျက်စိအထူးကုပညာကိုလေ့လာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်ကိုဖြတ်ကူးဖို့၊ ဘောလ်တစ်ပင်လယ်မှသည်ပင်လယ်နက်အထိဖြစ်သည်။ သူကဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏နောက်ဆုံး ၂ နှစ်၏နေ့စဉ်ဘဝ၏အတိတ်မှတ်တမ်းများသာမကဘဲလွတ်လပ်သောသမ္မတနိုင်ငံ၏ပထမ ၅ နှစ်တာကာလ၏အတိတ်မှတ်တမ်းများကိုပါသိမ်းဆည်းခဲ့သည့်ဤစာအုပ်တွင်၎င်းအားပြောပြရန်သူ့အားဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသုံးစွဲခဲ့သည်။
သူကစာလုံးတွေကိုသရုပ်ဖော်တယ် Pedro Arjona, ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ၊။ ၎င်းကိုလူသိများလာသည် ရုပ်ပြအနုပညာရှင် စုစုပေါင်း El Cubri နှင့်အတူ, ၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်အစွန်းရောက်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအလုပ်နှင့်အတူရုပ်ပြအသစ်တဖန်ပြန်လည်ရုပ်ပြသော။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်ရှိစာပေ » အမျိုးအစားများ » ဝတ္ထုနက် » မေလအတွက်သတင်း။ အနက်ရောင်ဝတ္ထု, ခရီးသွားနှင့်ရုပ်ပြ၏ရွေးချယ်ရေး
Juan Gelman ။ သူ၏မွေးနေ့။ ကဗျာအချို့